Isibuko, uBugcisa kunye noMboneleli weFactory-SHUNDA-IiNdaba zeNkampani
Iindlela ezingama-43 zexabiso eliphantsi kunye nabahombisi abakrelekrele bangaphakathi banokwenza indlu yakho ibonakale ibiza kakhulu
ngu admin ngo 2021-06-01
Sicebisa kuphela iimveliso esizithandayo kwaye sicinga ukuba nawe uya kuzithanda. Sinokufumana ezinye iintengiso kwiimveliso ezithengiweyo kweli nqaku elibhalwe liqela lethu leshishini. Ngaba uyafuna ukwazi imfihlo? Kunokwenzeka ngokupheleleyo ukwenza ikhaya lakho libukeke libiza kakhulu kunokuba linjalo; nonke...
Factory Price China Modern Double Silver Printing Paint Wall Bathroom Mirror kunye Shelf
ngu admin ngo 2021-05-28
I-Astronaut Spaceman INyanga Ubusuku Bokukhanya Igumbi lokulala elisecaleni kwebhedi ekwidesktop yokuYilo ehombise iTheyibhile kunye nodonga lwesibane sesibane soKhanya sabantwana abaNtwana
ngu admin ngo 2021-05-14
* Wamkelekile ulungelelanise zonke iintlobo zesibane / ukukhanya * Esi sibane Iimpawu eziphawulekayo: Uyilo olupholileyo lukasomajukujuku oluneenkcukacha ezithambileyo, lulungele ukuhombisa igumbi lokulala. Iya kuzisa amandla athile ebomini bakho. Ayisosibane sasebusuku kuphela, kodwa ikwayinto entle yokuhombisa yangaphakathi yekhaya lakho. Ungayibeka nokuba...
isibuko seglasi yangempela, izibane kunye neshelufu yokuhlobisa ikhaya
Ubukhulu becala sivelisa isibuko seglasi yokwenyani, izibane kunye neshelufu yokuhombisa ikhaya, kwaye samkelekile ngokwezifiso. Abathengi bethu bavela kwilizwe ngalinye, bonwabile kakhulu ngenkonzo yethu, intetho yokuphendula kunye nomgangatho weemveliso. Ngaphandle kwezi mveliso, sinako ukwenza ezinye, ukuba unomfanekiso, ubungakanani kunye nezinto et...
Iimveliso zokuhombisa zasekhaya zeShunda
I-MOQ yi-1 piece Shunda Home Decoration factory isekelwe kwi-2012. Sineminyaka engaphezu kwe-10 yamava kwimveliso, ukuyila, ukuthengisa kunye nenkonzo emva kokuthengisa kubathengi behlabathi. Inkampani yethu igxile ekuveliseni nasekuyileni zonke iintlobo zesipili (isipili seglasi, isipili seacyrlic), ubugcisa beplanga (...
Intshayelelo yenkampani yakwaShunda
I-MOQ sisiqwenga esi-1 iShunda Home Decoration factory ngumthengisi obonelela ngemveliso, uyilo, ukuthengisa kunye nenkonzo emva kokuthengisa kubathengi behlabathi. Inkampani yethu igxile ekuveliseni nasekuyileni zonke iintlobo zesipili (isipili seglasi, isibuko se-acyrlic), ubuGcisa kunye nemisebenzi yezandla (ibhokisi yomthi kunye neshelufu) kunye nezibane (itafile...